Nzira yekugadzira zvakanakisisa backlinks runyora rwuri kutora misika yekutsvaga misika?
Maonero ese uye vatengesi vekutsvaga mu-inthanethi vari kutsvaga mapepa emhando yepamusoro-soro yekuvandudza nzvimbo yewebsite uye kuwedzera bhizinesi rezvemabhizimisi. Kune nzira dzakasiyana dzekutora juisi yekubatanidza kune yako nzvimbo. Zvisinei, havasi vose vanoita sevakavimbika uye vanonzwisisa. Nhasi tichakugoverana newe mamwe emhando dzakanakisisa dzekuvaka chikwata. Nokutevera mutungamiri uyu, iwe uchakwanisa kuumba yakasimbiswa shure backlinks urongwa uye kusimudzira simba rako mumaziso evanotsvaga.
Nzira dzekutsvaga zvakadzama shure kumashure
bhizinesi duku kana guru rekutengeserana senzvimbo kufanana nezviratidzo zvevatengi vavo sekuti inzira yakakwana yokusimudzira mutsa wezita uye kubatsira vatenzi vatsva vanoita sarudzo yekutenga yakarurama. Ndicho chikonzero kana iwe ukakwana zvachose nechigadzirwa kana basa raunoshandisa, funga kutumira uchapupu kune iyo. Kuti uone kuti iwe uri mutengesi chaiwo, mabhizimusi epaIndaneti uye mawebsite zvinowanzoisa backlink panzvimbo yako kwauri pasina iwe kunyange kubvunza pamusoro pazvo.
Saka sechinoshandiswa iwe unogona kuva mutengi wevamwe vane kodzero dzewebhu dzekutsvaga kuwana humwe humwe hupupuriro hunobva kwavari.
Tsvaga mazamu matsva ekuvakisa mazano kubva pamabhurigi akakwirira
Shanduro dzeSpammy dzekugadzira dzinosvika munhoroondo. Mazuva ano, kuti ugadzire zvakanyanya shure backlinks urongwa, unofanirwa kushandisa mairi e-mail kunovaka zvikwereti zvakare kumashure. Chokutanga pane zvose, unoda kuwana vanhu vakarurama kuti usvike. Nzira yakajeka yekuita nayo ndeyokutsvaga mazita ezvakanakisa mubhuku zvigwaro. Mutsamba yakadaro, unogona kuona bhizimusi rako rekushandira pamwe nekugadzirisa ukama hwakanaka navo. Kuti uwane shamwari dzakakwana, iwe unogona kungoisa mibvunzo inotevera muGoogle search box - "zvakanakisisa (yako musoro) mabhuku egore," "zvandinoda (musoro wako) blogs," "rondedzero ((musoro wako) blogs kuti uverenge. "Bvisa ma blogs aya uye bvisa zvinyorwa zvako zvakakosha kumashure.
Kuongorora kweBlogger kunogona kuunza kukosha kwebhizimisi rako kukurudzira. Kana iwe uchitengesa chimwe chinhu chakakosha uye chinokosha kune vanhu, unogona kuchinja zviri nyore muzvikamu zvehupamhi hwemashure. Chinhu chose chaunoda ndechokuti upe vatengesi vako niche pfungwa dzevatengesi nemishonga yako kana mazhenesheni zvekuda. Vachaita rutsigiro rwezvakanaka pane zvishandiso zvemashoko kana mavara akaonesa uye vagogovana naro nevateveri vavo, vachitungamirira vatsva vangave vatengi kusiti yako.
Link link round
. Iwe unogona kuwana tsvakurudzo dzomukati mumusika wako niche kuisa mibvunzo inotevera muGoogle search box - "yako keyword" + "link roundup"; "Shoko renyu guru" + roundup; "Shoko rako guru" + "zvakanakisisa," uye zvichingodaro nezvakadaro. Pamuganhu unotevera, shandisa zvigadziro zvako kune munhu anenge achiita chimwe chezvinhu zvakakodzera zvebhizimisi rako Source .